Sa’ati 24 kan hanga 10 a.m tti deparmantiin mana fayyaa Iowa gabaaseti namni sababa Covid-19 haarawa | KWIT
Oromo News 12.21.2020
Akka jarri jetteti namni tokko wayta due fi wayta gabaafame addaan turiiti akka qabu himan. Torbaan darban keessa, Iowa akka gabaasseti guyyaa tokkoti averijiidhan namni 46 akka du’u himan.
Lakkoofsidarbe sirraaha akkuma dhufu jirutti Nebraska keessati guyyaa Sunday namni hospitaala jiru 600 gad akka tae gabaasan.
Lakkoosi kunis akkuma gad xiqqaata dhufu jirutti jira akka ji’oota darbe namni 1000 lakkaawame booda. Garuu, lakoofsi isaa wayta October 1st irraa 2.5 ol guddatee jira.
Ammati, sireedhan hospitaala parsantiin 14% dhukubsattoota corona virus dhaan qabaanii jiru. Lakkoofsi kunis torbaan kanin keessati parsantii 15% gad yoo kan tau seerri virus dhaaf kaahame akka xiqqaatu himan.
Lakkoofsi namoota Covid-19 qabaman South Dakota keessati namni qabamu torbaan lamaan kana keessa gad xiqqaachu jalqabame jira akka biyyaatile, haa tau malee state keessati namni due akkuma guddate jiru jira.
State nama haarawa guyyaa har’aa duan 20 gabaasani jiran waliigalatti namni due 1,381 gaheera,nama 30 Union County keessa dabalatee.